Ndị na-emepụta ihe oriri | Rayson
Rayson na Rayson Mpaghara, Huasha Road, Shashan, Foshan High South Mpaghara, Guangdong, China. Isi Ngwaọrụ kachasị mma 10inch White Head Food onye na-ebunye ya
Ngwaahịa a bụ nke ukwuu mgbochi nje. Ihe ọ na - egosi akụ na - egwu egwu na - enyere aka igbochi uto nke nje na - akpata uto nke na ụkwụ.
Rayson Global Co., LTD bụ nke sino - Nnọọ na 2007 nke dị na Shishan Town na Counters mpaghara, ọ sịrị na ndị ọrụ ama ama dị ka v
Ruo ugbu a, Rayson gafere asambodo usoro nchịkwa mba ụwa. Ngwa ahịa niile gụnyere ngwaahịa ọhụrụ anyị na-eweta na usoro ọhụụ, mma, na ọnụahịa asọmpi. Mgbe anyị mmepe afọ gasịrị, anyị ebilitela mmekọrịta dị ogologo oge na ndị ahịa anyị ogologo oge n'ụwa niile. Biko nwee obi ike na anyị nwere ikike mbupụ ngwaahịa anyị na mmebi iwu agaghị enwe na ngwongwo ndị enyerela. Anyị ji obi anyị niile nabata ajụjụ gị ma kpọọ. Ya na usoro mmepụta zuru oke na ndị ọrụ nwere ahụmahụ, Rayson nwere ike ịhazi, zụlite, na nwalee ngwaahịa niile arụ ọrụ. N'oge niile usoro ahụ, ndị ọkachamara QC anyị ga-ahụ usoro ọ bụla iji hụ na njiri mara mma. Ọzọkwa, nnyefe anyị bụ n'oge, nweekwa ike igbo mkpa nke onye ahịa ọ bụla. Anyị na-ekwe nkwa na ezigara ndị ahịa na nchekwa na ụda. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ chọọ ịmatakwu banyere anyị, kpọọ anyị ozugbo. Ebe ọ bụ na ebe guzobere, Rayson chọrọ ịza ụzọ dị egwu ma dị mma maka ndị ahịa anyị. Anyị ehiwela nke anyị r&D Center maka imewe ngwaahịa na mmepe ngwaahịa. Anyị na-agbaso usoro nchịkwa Standard dị mma iji hụ na ngwaahịa anyị zutere ma ọ bụ gafere ndị ahịa anyị. Na mgbakwunye, anyị na-enye ọrụ ahịa maka ndị ahịa niile n'ụwa niile. Ndị ahịa chọrọ ịmatakwu banyere ngwaahịa ọhụrụ anyị ma ọ bụ ụlọ ọrụ anyị, kpọtụrụ anyị.
Kedu usoro ịkwụ ụgwọ ị na-anabata? LC na anya / site na tt, site na TTE, 30% ego na 70% na-eme megide akwụkwọ mbupu Winin 7 na-arụ ọrụ na-eme ka ọ bụrụ matraasi? 1. Ebe a na-edebe ihe dị na ya dị larịị na ime ụlọ gị, jiri nwayọ dọta mado ma tinye ya n'elu akwa gị. 2.Cee nke a na-egbutu akpa ahụ na mkpa iji jide n'aka na ị gaghị egbutu plastik n'ime ma ọ bụ matraasi, adala mma mma. 3. Hapụ matrat-a matrasị na akwa gị n'elu akwa gị. 5.Lalalow 24 awa maka matraasi ọhụrụ gị iji gbasaa ma gbasaa. Ee, anyị na-eleta ụlọ ọrụ anyị n'oge ọ bụla, anyị dị nso na ọdụ ụgbọ elu mba ofesi, ọ na-ewere otu awa, anyị nwere ike ịhazi ụgbọ ala iji bulie gị.
Ọ na-agbasi mbọ ike mgbe niile, Rayson etolitela ịbụ onye na-achụ n'ụlọ ahịa na ndị ahịa. Anyị na-elekwasị anya n'ịdị ike nke sayensị na azụmaahịa ọrụ. Anyị edobela ngalaba ọrụ ndị ahịa ka ọ ka mma nye ndị ahịa na ọrụ ngwa ngwa gụnyere ọkwa nsuso. Hamarvik na-a mị nkwa na anyị na-ekwe nkwa na anyị na-enye ndị ahịa ọ bụla nwere ngwaahịa dị elu gụnyere matrarvik matrar na ọrụ zuru oke. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmata nkọwa ndị ọzọ, anyị nwere obi ụtọ ịgwa gị. A na-eme nke Rayson dabere na ụfọdụ ihe ndị dị mkpa. Ha bụ nkasi obi, iku ume, nchekwa, agba na ọdịdị.
Ọzọkwa, nnyefe anyị bụ n'oge, nweekwa ike igbo mkpa nke onye ahịa ọ bụla.